Vaovao - Tombony ho an'ny milina fanapoahana fasika ranoka
Miaraka amin'ny fepetra takian'ny tontolon'ny indostria dia mihamaro ny mpanjifa misafidy milina famaohana fasika fa tsy milina fanapoahana fasika maina masinina famaohana fasika no ampiasaina amin'ny: aerospace, electronics, metal, metal, bobongolo, milina simika sns. ampiasaina amin'ny fanodinana masinina fanapoahana fasika. Milina fanapoahana fasika ranoka dia masinina manapoaka fasika. Ny masinina fanapoahana fasika ranoka dia tsy mitovy amin'ny milina fanapoahana fasika maina, ny milina fanapoahana fasika ranon-javatra dia ny fasika (abrasive) atsofoka anaty rano, rano sy fangaro fasika, ary avy eo ampiasao ny paompy fitotoana rivotra sy ny rivotra voafatotra, amin'ny alàlan'ny basy haingam-pandeha jet ho zahana amin'ny workpiece, hahatratrarana ny tanjon'ny faritra fanadiovana sy ny famitana ny faritra. Ny milina famaohana fasika maina dia tsy hampifangaro fasika sy rano ary hampiasa ny paompy fanadiovana. Milina fanapoahana fasika ranoka dia masinina manapoaka fasika. Ny masinina fanapoahana fasika ranoka dia tsy mitovy amin'ny milina fanapoahana fasika maina, ny milina fanapoahana fasika ranon-javatra dia ny fasika (abrasive) atsofoka anaty rano, rano sy fangaro fasika, ary avy eo ampiasao ny paompy fitotoana rivotra sy ny rivotra voafatotra, amin'ny alàlan'ny basy haingam-pandeha jet ho zahana amin'ny workpiece, hahatratrarana ny tanjon'ny faritra fanadiovana sy ny famitana ny faritra. Ny milina famaohana fasika maina dia tsy hampifangaro fasika sy rano ary hampiasa ny paompy fanadiovana.
Ny milina sandblasting misy ranoka dia ambony noho ny milina sandblasting maina noho ny fahombiazany avo sy ny fanjifana kely kokoa. Izy io dia afaka manatsara ny famaranana sy ny tanjaky ny workpiece ary manova ifotony ny olan'ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Ny fametrahana ny fitaovana dia tena mety ihany koa, ary tsy mila atrikasa misaraka. Azo zahana mivantana eo amin'ny tsipika famokarana.
Fampiharana ampiasain'ny milina sandblasting misy rano
Ny milina sandblasting misy ranoka dia be mpampiasa koa amin'ny indostria, toy ny aerospace, electronics, metal, hardware, bobongolo, milina simika, sns, izay azo zahana amin'ny milina sandblasting misy rano, ary mikoriana mankany amin'ny conveyor visy any ambany, izay alefa ao anaty ascenseur amin'ny alàlan'ny conveyor visy, ary atsangano amin'ny ascenseur amin'ny separer ho an'ny fisarahana. Ny vovoka misy lasantsy dia entin'ny mpankafy ao anaty mpanangona vovoka. Aorian'ny filtration dia lasa rivotra madio izy ary avoaka amin'ny atmosfera. Ny vovoka dia latsaka ao anaty boaty fanangonana vovoka eo am-pototry ny mpanangona vovoka amin'ny alàlan'ny rivotra miverina mitsoka, ary azon'ny mpampiasa esorina tsy tapaka izy io. Ny fasika dia mivoaka avy amin'ny fantsom-pako ary afaka ampiasain'ny mpampiasa indray. Ny fangaro fasika notifirina dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fantsom-panafody tao anaty efitrano, ary avy eo nampiasana indray taorian'ny fisarahan'ny mpampisaraka. Ny firafitry ny fitaovana fitifirana fitifirana dia namboarina tamin'ny alàlan'ny solosaina telo-habe, ary ny zoro sy ny toerana rehetra amin'ny fandaminana dia voafaritra amin'ny famolavolana solosaina. Miorina amin'ny fikarakarana ireo sanganasa rehetra mila diovina dia tokony hahena araka izay tratra ny fanipazana ireo projectile, mba hanatsarana ny tahan'ny fampiasana projectile ary hampihena ny fitaovan'ny takelaka fiarovana ao amin'ny efitrano fanadiovana.